सफलताको लागि २० मन्त्र ~ Khabardari.com
सफलताको लागि २० मन्त्र
१. आफ्नो कमाइले खर्च गर्ने जिन्दगी बनाउनुहोस
२. दिनमा कमसे कम तीन व्यक्तिको प्रशंसा गर्नुस
३. आफ्नो भुल स्वीकार गर्नुमा कुनै संकोच नमान्नुस
४. कसैको सपनामाथी नहाँस्नुस
५. तपाइको पछाडी खडा व्यक्तिलाई पनि अगाडि जाने मौका दिनुस
६. हरेकदिन हुनसक्छ भने उदाउदै गरेको शुर्यलाई हेर्नुस
७. अति आवश्यक कुरा छ भने मात्र कुनै चिज उधारो लिनुस
८. कसैसित केही सिक्नुछ भने विवेकले दुईपटक सोध्नुस
९. ऋण र शत्रुलाई कहिल्यै ठूलो हुन नदिनुस
१०. ईश्वरमाथी पूरा भरोसा राख्नुस
११. प्रार्थना गर्ने ओठ भन्दा सेवा गर्ने हात अघि सार्नुस
१२. आफ्नो कामसित मतलब राख्नुस
१३. समय धेरै मुल्यवान छ त्यसैले यसको फाल्तु खर्च नगर्नुस
१४. जे तपाईंसित छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर खुशी हुन सिक्नुस
१५. खराबी कसैलाई पनि नगर्नुस किनकी खरावी डुङ्गामा प्वाल समान हो यसले पुरै डुङ्गा डुबाइदिन्छ
१६. हमेशा सकारात्मक सोच राख्नुस
१७. हरेक व्यक्ती असिम शक्ति लिएर पैदा हुन्छ त्यो शक्तिलाई बाहिर ल्याउनुहोस
१८. खानपिन , भोजनमा ध्यान दिनुस र कसरत , योगा , ध्यान नियमित रुपमा गर्नुस
१९. पुस्तकहरु पढ्ने बानी बसाल्नुस
२०. सफलता उसैले प्राप्त गर्छ जो केही गर्न चाहन्छ , प्रयासरत छ , केही पाउनको केही गुमाउन होइन बल्की केही गर्नुपर्दछ ।